Ogaden News Agency (ONA) – Haya’adda – Taleh Heritage Foundation – oo shir taariikhdii Daraawiishta iyo Sayidka ku qabatay Nairobi
Haya’adda – Taleh Heritage Foundation – oo shir taariikhdii Daraawiishta iyo Sayidka ku qabatay Nairobi
Munaasabad balaadhan oo ay soo qaban qaabiyeen Teleh Heritage Foundation oo looga hadlayey taariikhdii Daraawiishta iyo Halgamaagii waynaa ee Sayid Maxamed Cabdile Xasan ayaa galabta lagu qabtay hall wayn oo kuyaala badhtamaha xaafada ay Soomaalidu ubadan tahay Eastlight ee magaalada Nairobi.
Kulankan oo u jeedadiisu ahayd soo noolaynta taariikhda sayidka ayaa waxaa kasoo qayb galay dadwayne soomaaliyeed oo aad tirabadan oo ka koobnaa bulshada qaybaheeda hadii ay noqon lahady Dhalinyaro,waxgaran,Hooyooyin iyo Aqoon yahano.
Kulanka ayaa waxaa lagu casuumay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ka dhisan magaalada Nairobi, waxaana si gaar ah loogu casuumay munaasabadan Jaaliyada Ogaadeeniya ee Nairobi, maadaama shacabka Ogaadeeniya ay taariikhda gumaysi ladirirka safka hore kaga jiraan. Waxgaradkii munaasabada kasoo qayb galay ayaa waxaa kamid ahaa Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Olol Diinle oo ay dadka Soomaaliyeed guud ahaan sifiican u wada yaqaanaan Reer Suldaan Olol Diinle.
Suldaan Cabdiraxmaan ayaa si qoto dheer oo waafi ah waxa uu ugu hadlay guud ahaan gumaystayaashii kala duwanaa ee soo gumaystay guud ahaa gayiga soomaaliyeed. Sudaanka ayaa waxa uu si gaar ah uga hadlay qadiyada Ogaadeeniya oo uu sheegay inay tahay qadiyad soomaaliyeed maantana aad moodo in lagu daayey qadiyaadaas iyo dhulka taariikda dheer leh ee inaga maqan dad gaar ah oo uu sheegay inay yihiin kuwa sida dhabta u leh Ogaadeeniya maadaama maanta inteenii kale aan ugaga seexanay dhulkaas xorayntiisa iyaga. Suldaan Cabdiraxmaan ayaa waxa uu si gaar ah u xusay dhibaatadii ay ciidamada gumayisga Ethiopia ugaysteen dadka Soomaaliyeed, isagoo dhanka kale xusay sidii geesinimada lahayd ee Suldaan Olol Diinle ula dagaalamay gumaysiga Xabashida.
Sudlaanka ayaa munaasabada ka sheegay in Aabihii Allaha unaxariistee Suldaan Olol Diinle iyo 10 mujaahid lagu dhex dad dalay jeelka loo yaqaan Alambaqa sababta loo dal dalayna ay ahayn Qadiyada Ogaadeeniya oo uu isagu wax kalahaa.
Waxgaradkii munaasabada ka hadlay ayaa dhamaantood waxa ay ku nuux nuux sadeen in taarkhdu ay tahay maguuraan ruux walbana ay taariikhdu ku xusi baal dahab ah ama baal madow. Munaasabada galabta ayaa waxaa lagu daawaday muuqaalo ka hadlaya taarikhdii Sayidka iyo daraawiishtiisii.
Munaasabada galabta ay soo qaban qaabiyeen Teleh Heritage Foundation ayaan iyadoo kale wali aysan ka dhicin magaalada Nairobi oo maalin kasta lagu qabto kulamo siyaasadeed iyo kuwo bulsho, wax ayna dadkii munaasabada kasoo qayb galay si kal iyo lab ah u bogaadiyeen masuulka ugu sareeya Teleh Heritage Foundation Guutaale inuu soo nooleeyey Taarkh in badan gumaysatuhu isku dayey inuu tirtiro.
Muuqalada munaasabada waxaad kala socotaan barnaamijka Ilays.